အက်ကွဲ သံစဉ် | PoemsCorner
တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်တတ်တယ့် ကောင်းကင်ကြီး ခုတော့ မည်းလို့ညို့လို့… မခို့တရို့နဲ့သူက ရင်လျားဖို့ပင် သူတိမ်တွေကို ဝတ်ဆင်နေရသည်။ ထိုခဏကတော့ ကျွန်တော် တေးသွားချိုနဲ့ချော့ဖို့ ပလွေကို ကြိုးညှိုနေချိန်ပေါ့…
ရေဆာရင် သောက်ဖို့ ဝိုင်တစ်ခွက်တော့ကျန်သေးတယ်… သူမကတော့ ခုနေ ကော်ဖီဖီခါးခါးကို လိုလားနေရဲ့… ဒါပေမယ့်သူမမေ့နေတာ
သူမကျွန်တော့်ဆီရောက်လာတော့ မိုးကြီးက ငိုလျက်ရှိသည်။ ထိုမိုးကပင် ကျွန်တော်မရိပ်မိအောင် သူမ မျက်ရည်တွေကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သို့သော် ကတ္ထီပါးစသည် လေတိုက်တိုင်းလန်နေတတ်၍ သူမငိုမှန်းကျွန်တော်သိခဲ့သည်။ ထိုနေ့က သူမသည် မိုးနဲ့အတူ ငိုခဲ့ပါသည်… သို့သော် မိုးသည် သူမလောက်မငိုခဲ့ပါ… ရေဆာ၍ ဝိုင်သောက်ရန် ကျွန်တော့်ဖန်ခွက်ကို မျက်စပစ်နေသဖြင့် ကောင်းကင်ကို ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆဲဆိုမိသည်… သူမငိုနေသေးသည်မဟုတ်ပါလား…
ဟောခုတော့ကြည့်တော့…. ဝမ်းနည်းစွာမြည်ဟီးနေသော ကောင်းကင်ကြီးက ယခုတဖန် ပုံစံပြောင်း၍ အဝတ်ဟောင်းလောင်းနှင့်ထွက်လာပြန်သည် ရှင်းလို့လင်းလို့ နေသာလို့ပါလား..
သူမတွက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ရေး အသဲကွဲသံစဉ်ကို သူမကို နားစဉ်စေခဲ့သည်… သူမသည် ကျွန်တော့် ၏ တေးသွားကြားတွင် သူမရွတ်ဆိုဖူးသော ဘုရားစာ အချို့ကို အလွတ်ပြန်နေသည်… ကျွန်တော်သည် သီကျူးလက်စ တေးသွားကို ခဏသိပ်၍ သူမကို သနားစွာနှင့်ကြည့်နေသည်… သို့သော် သူမသည်… သူမကွဲသွားသော ဖန်ခွက်တစ်ခု၏ အရဿ ကို ပြင်းပြင်းရှရှ ခံစားပြီးသွားပြီဖြစ်သည်… သူမကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းငါမစွမ်းသာ၍ ကျွန်တော် ဝိုင်ကို အာစွတ်ရုံ တေ့လိုက်သည်…
သူမထံမှ အမုန်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော မျက်ဝန်းများအံကျလာမှန်းသိသော်လည်း ကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ်ထားမိသည်… ကျွန်တော့်တွင်တော့ အချစ်တွေရှိပါသေးသည် ဟုတော့သူမကို မပြောခဲ့မိပါ… သူမသည်လည်း ကော်ဖီသောက်ဖို့ရန်သတိမရခဲ့ပါ…
ထိုအချိန် ခံစားချက်တချို့က အကြင့်မကောင်း ပုံစံအဟောင်းနှင့် ကျွန်တော့်ဆီက ထွက်ခွာ၍ပြင်ဆင်နေ၍ လက်မှတ်သိမ်းထားလိုက်ရသည်… သူမကရိပ်မိပုံမပေါ်… သူမသည် သူမ၏ ငိုရှိုက်သံကို လှပစွာတေးသီဖို့ကြိုးစားနေချိန် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်…
ကျွန်တော်ခေါင်းခါမိသလား ခေါင်းညိမ့်မိသလားတော့ မမှတ်မတော့ပါ… ထိုခဏကတော့ သူမကော်ဖီခွက်ကို တိုက်ချသွားပြီဖြစ်ပါသည်… ကျွန်တော်မြင်ပါသည်… သူမ ခြေဖဝါးတို့ ဒဏ်ရာရနေသည်ကို… သို့သော် ကျွန်တော်ရင်တွင်းတွင်ရော…
ထိုနေ့က တော့တိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါသည်… သို့သော် မိုးကတော့ လွမ်းဖွယ်ကောင်းအောင် နောက်တစ်ကြိမ်မရွာတော့ပါ..
နွေရာသီကို မျှော်သော်တစ်ခုသော ဆောင်းတစ်ခုသည် နှုတ်ခမ်းတစ်ခု ကို အေးခဲစေလျက်ရှိသည်… ကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီကြားမှ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည် ကျွန်တော့်ကို အကြည်းတန်စွာ ကြည့်လျက်ရှိသည်… ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေမိသည်။သို့သော် အရှိန်မထိန်းနိုင်သော လေစိမ်းများသည် နှင်းငွေ့များကို ရက်ရက်စက်စက်သယ်လာကြသည်။ ကျွန်တော်ထင်ပါသည်… ကောင်းကင်ကြီး ဝမ်းနည်းနေလိမ့်မည်လို့…
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်သည် ကျွန်တော့်လက်ကြားမှ လေခေါ်ဆောင်ရကို လိုက်သွားကြသည်… စာရွက်များ ကို ထိုသူမဖတ်လျက်ရှိသည်… နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွင် သူမ ဖတ်ဖို့မေ့လျော့ခဲ့သည်ထင်…ကျွန်တော့်ဆေးစစ်ချက်အဖြေကလေး ငိုက်မျဉ်းလျက်ပင်ရှိသေးသည်…. နှလုံးရောဂါလေးသည်…. တစုံတခု အေးစက်သွားသည်ကို မသိလိုက်ပါ…. လေတစ်ချက်ပြန်ဝှေ့ခဲ့သည်ကိုလည်း မသိလိုက်ပါ… သူမပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ကိုလည်းမသိလိုက်ပါ… သူမငိုယိုနေသည်ကိုလည်း မသိလိုက်ပါ…
သို့သော် ထိုနှလုံးရောဂါလေးသည် အသဲခွဲမိခဲ့ဖူးသော ချစ်သူကိုတော့ မတောင်းပန်မိခဲ့ပေ… ထို့ကြောင့် တစုံတခုကိုတော့ မသိလိုက်ပါ… တစုံတရာတော့…………………………………………………………………………………………..သိနေပါသည်…
In: ဝတ္ထု Posted By: salt Date: May 5, 2011
သီအိုအလွဲ တိမ်အကွဲနှင့် သူမပြန်ချိန် (သို့) မိုးဖွဲရွာချိန်
Leave comment No comment & 220 views